Madasha Xisbiyada Qaran oo soo dhoweysay Guddiga uu magacaabay Cabdi Xaashi - Awdinle Online
Madasha Xisbiyada Qaran oo soo dhoweysay Guddiga uu magacaabay Cabdi Xaashi
Guddoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Shariif Sheekh Axmed ayaa soo dhoweeyay Guddigii uu xalay magacaabay Guddoomiyaha Aqalka Sare, kaasoo ka kooban 9 xubnood oo ka shaqeynaya isu keenida Madaxda dowladda Federaalka, dowlad goboleedyada iyo sidii uu u qabsoomi lahaa shir wadatashi looga arrinsanayo doorashooyinka.
Sheekh Shariif ayaa qoraal uu bartiisa Twitter soo dhigay ayuu ku shaaciyay inay taageeri doonaan dadaalada uu wado Guddoomiye Cabdi Xaashi.
“Waxaan soo dhoweynayaa guddiga uu magacaabay Guddoomiyaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi ee ka howlgali doona isku-keenista madaxda labada heer Dowladeed iyo qabsoomidda shirka looga arrinsanayo hannaanka lagu geli doono doorashooyinka Qaranka 2020/2021, si loo helo hannaan raali ay isaga yihiin dhammaan saamileyda siyaasadda ee dalka” ayuu yiri Shariif.
Sidoo kale waxaa uu boggaadiyay Guddoonka Aqalka Sare oo muujiyay biseyl ku aadan inay ka go’an tahay xal ka gaarista mashaakilka mudada dheer u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada.
“Waxaan ka rajeyneynaa in labada dhinac ay muujiyaan tanaasul iyo in laga fikiro mustaqbalka Soomaaliya oo wadahadal iyo isqancin oo kaliya guul lagu gaari karo”ayuu yiri Shariif.
Si kastaba ha ahaatee waxaa la qorsheynayaa inay shir isugu yimaadaan dowladda Federaalka iyo dowlad goboleedyada ka hor 25 bishan June, waxaana shirkaas qabsoomidiisa qeyb ka ah Beesha Caalamka oo dadaalo xooggan ugu jirta sidii uu ku dhici lahaa.
Previous articleGuddiga arimaha gudaha Baarlamaanka Soomaaliya oo kulan la qaatay wasiir Sabriye iyo Xaliimo Yaray .
Next articleKulanka Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Biixi ee jabuuti Maxay kawada hadli karaan